यी हुन् महिलालाई आकर्षित गर्ने पुरुषका पाँच अंगहरु !::Leading Nepal News
यी हुन् महिलालाई आकर्षित गर्ने पुरुषका पाँच अंगहरु !
एजेन्सी । यदि तपाई पुरुष हुनुहुन्छ र कुनै महिलालाई आफुतर्फ आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्ना शरीरका केही अंगहरुको भरपूर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । मनोविज्ञान चिकित्साले पुरुषका विशेष ५ अंगहरुमा महिलाहरु बढी आकर्षित हुने बताउँछ ।
चौडा छाती: चौडा छातीले शरीरलाई पुष्ठ र बलियो देखाउँछ । यस्ता कद काठी भएका पुरुषहरुप्रति महिलाहरु विशेष आर्कषित हुन्छन् । जुन पुरुषको छाती चौडा हुन्छ त्यस्ता पुरुषहरुलाई सधै महिलाले मनपराउँछन् ।
सुन्दर ओठ: धेरैले पुरुषहरु महिलाको सुन्दर ओठप्रति आकर्षित हुने मात्र सुनेका छन् । तर यसको विपरित धेरै महिलाहरु पुरुषको पनि सुन्दर ओठप्रति आकर्षित हुन्छ । सुन्दर ओठ महिलालाई आकर्षित गर्ने पुरुषको बलियो हतियार हो ।
काँध: काँध पुरुषको त्यो अंग हो जसलाई प्रत्येक महिलाले सबैभन्दा पहिले नोटिस गर्छन् । पुरुषको गोलो चौडा काँधले महिलालाई विशेष आकर्षित गर्छ ।
सुन्दर आँखा: चाहे पुरुष होस् या महिला सुन्दर आँखाप्रति सबै आकर्षित हुन्छन् । पुरुषका सुन्दर आँखाले महिलाहरुलाई आकर्षित गर्ने काम गर्छ साथै उनीहरुको भित्री भावलाई बुझ्न पनि महिलाहरुले आँखालाई विशेष नोटिस गर्छन् ।
कम्मर: कम्मर पनि महिलालाई आकर्षित गर्ने पुरुषको एउटा प्रमुख अंग हो । पुरुषका अंग्रेजी ‘भी’ सेपका कम्मर महिलाहरुलाई एकदमै मनपर्छ ।
यी बार जन्मने व्यक्ति हुन्छन् साह्रै नै भाग्यमानी….
यी राशिका पुरुष हुन्छन् सबैभन्दा खराब पति ! तपाई पनि पर्नुभयो कि ?
आज हरिशयनी एकादशी, यसकारण रोपिन्छ आज तुलसी…
अब आफ्नो कान हेरेर नै थाहा पाउनुहोस् तपाई कति भाग्यमानी ?
असार ३१ गते चन्द्रग्रहण, कुन राशिलाई कस्तो प्रभाव ?
पैतलामा यस्तो चिह्न भएका व्यक्ति हुन्छन् साह्रै भाग्यमानी..